ब्लगमा भोटे ताला लगाउने कि ?
लेख चोरी गर्नेहरु लाई निरुसाहित बनाउ । यदी लेख रखदा, लेख आफ्नो हैन भने, स्रोत खुलाई दिनु होस । नत्र किन अरुको लेखलाई आफ्नो भनेर लेख्नु हुन्छ ? किन सस्तो लोकप्रियताको मोह ? यदी तपाईंमा शिप र जागर छ, भने त्यसतै, नभए त्यो भन्दा राम्रो लेख्नु होस । कि बिर्सनु भयो ? नेपाली उखान " सियो चोरने ले, फाली चोर छ, फाली चोरले घर फोड छ । " त्यसकरण मित्रहरु आफ्नो ब्लगमा भोटे ताला लगाउनु होस । यदी तपाईंको ब्लगमा Post Subscribe, RSS, Share bottom नराख्न सल्लहा दिन्छु ।